Daaqadii Aqoonsiga Jamhuuriyada Somaliland way Furan Tahay
Sunday July 30, 2017 - 11:23:40 in Wararka by
LONDON(CYN)Daaqadii Aqoonsiga Jamhuuriyada Somaliland way furan tahay, haddii dalalka Dimuquraadigu ka faa'iidayn waayaan, xoogag kale ayaa iman kara," Sidaa waxa lagu bilaabay
warbixin wargeys ka soo baxa dalka Norway uu daabacay oo lagu waraystay wakiilka Somaliland u qaabilsan midowga yurub Mr. Mikael Torstensson.
Wargeyska Dagen ee dalka Norway, oo warbixin dheer ka diyaariyey hiigsiga Jamhuuriyada Somaliland ugu jiro aqoonsi ay caalamka ka hesho, waxaanay u qornayd sidan:- "Ereyada dimuqraadiyada, madax-bannaanida diinta, xuquuqal insaanka, ayay Mr. Mikael Torstensson iyo Magnus Oscarsson ku dedaalayaan inay ka dhaadhiciyaan caalamka in aqoonsi caalami ah lagu siiyo Somaliland.
Daaqadii way furan tahay, haddii aynu doonayno inaan taageerno, ayuu sheegay, balse waxuu ka digay haddii waddamada reer galbeedku ka faa’iidaysan waayaan, cid kale iman karaan.
Aqoonsiga waddan cusub waa arrin saamayn dhinacyo badan yeelata. Baddi, dad ka cadhaysiisa oo abuurta khariidad cusub. Ma jiro dal qaadan kara dalka Taywan ee dimoqraadiga ah, haddii waddanka quwada leh ee Shiinuhu hortaagan yahay?
Aqoonsiga xukuumada Falastiin iyo aqoonsi la’aanta Saxaraha Galbeed waa laba tusaale oo muujinaya adkaanta aqoonsiga, iyo marka xukuumadaha cusub doonayaan inay helaan taageero.
"Ma sahlana shaqada i sugaysa,” ayuu sheegay Mikael Torstensson oo ah Wakiilka Midowga Yurub ee jamhuuriyadda Somaliland.
"Waxuu kulan la yeeshay xisbiga dimoqraadiga Katooliga xildhibaan ka tirsan Mr. Magnus Oscarsson (KD), oo hormood ka ahaa madax-bannaanidii dalka Sweden qaatay. Xildhibaankan ayaa qoraal u gudbiyey Ku-xigeenka Wasiirka Arrimaha Dibedda Margot Wallström, ajende xisbiga KD hadafkiisa koowaad ka dhigtay aqoonsiga Somaliland dayrta soo socota, taageero badana ka filayo guud ahaan xisbigiisa.
Tallaabo loo Qaaday Dhinaca Aqoonsiga:
Dhowaan jamhuuriyada Somaliland waxay xafiis ka furatay dalka Sweden. Waa talaabo kooban oo dhinaca aqoonsiga loo qaaday, balse Mr. Torstensson ayaa sheegay inay xoojin doonto heshiisyada xukuumadaha Itoobiya iyo Imaaraadaha Carabta la saxeexatay Somaliland. "Waa nooc aqoonsi ah,” ayuu yidhi.
Wallow aannu jirin dal aqoonsi caalami ah siiyey Somaliland, Mr. Mikael Torstensson ayaa tilmaamay, tusaale ahaan in dalka Sweden ku biirin karo, isla markaana u bilaabi karo taariikh iyo taageero guud ahaan gobolka, abaalmarinta dariiqa wanaagsan ee dimuqraadiyada.
"Waa fursad dahab ah inaan aqoonsanno dal si rasmi ah ugu dhaqma nidaamka dimuqraadiga, ilaalinta xuquuqal-insaanka iyo madax-bannaanida. Tusaale fiican ayuu qaarada Afrika u noqonayaa, taasoo dalka Sweden ka dhigi karta hormoodkiisa,” ayuu sheegay xildhibaan Magnus Oscarsson.
Mikael Torstensson oo ka jawaabayey sababta midabka huruud ah u siiyey jamhuuriyada Somaliland Hoyga madax-bannaanidu (urur ka shaqeeya qiimaynta nidaamka dimuqraadiga caalamka). Waxay noqotay dalka keliya ee midabka laga siiyey geeska afrika, sababtoo ah maaha hogaamiyahoodu keligii-taliye.
"Midabka Huruudu wuxuu tilmaamayaa inay ka jirto madax-bannaani kala badh ah, oo sababteeda keentay doorashooyinkii dib loogu dhigay, inkastoo dhammaadka sannadkan dhici doonaan, abaaraha jira oo roob la’aantii labadii sannadood u dambeeyey keeneen,” Ayuu yidhi, Mikael Torstensson.
Xidhiidh wanaagsan ayaa u dhexeeya mucaaradkooda. "Waddamada jaarka, madaxda mucaaradku xabsiyada ayay ku jiraan, halka Somaliland ay xubno ka yihiin baarlamaanka,” ayuu raaciyey xildhibaan Magnus Oscarsson.
Mikael Torstensson ayaa faalladiisa ku wajahan aqoonsiga Somaliland ku sheegay inay tusaale wanaagsan u noqon doonto dhismaha xukuumadaha qabaa’ilka isku haystaan, sida Afgaanistaan, Liibiya iyo Siiriya.”